प्रधानमन्त्रीले बोलाएर सर्वदलीय बैठक, कस्ता विषयमा हुँदैछ छलफल? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रधानमन्त्रीले बोलाएर सर्वदलीय बैठक, कस्ता विषयमा हुँदैछ छलफल?
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार साँझ पाँच बजेका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस बालुवाटारमा मृगौला पीडितहरु धर्नाः ‘प्रधानमन्त्रीको उपचार राज्यले गर्छ, हाम्रो कसले गर्छ ?
याे पनि पढ्नुस ओलीलाई अझै अप्ठेरो, छन् चिन्तित र तनावयुक्त मुडमा
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक ‘जनयुद्ध’ दिवसमा सहभागी
ट्याग्स: केपी ओली, प्रधानमन्त्री, सर्वदलीय बैठक